ကျော်ခ| February 8, 2013 | Hits:24,279
စီးပွားရေး အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဂျာမနီကို ဦးသိန်းစိန် ကမ်းလှမ်းSSPP/SSA ထိန်းချုပ် ဒေသ၌ အစိုးရ တပ်အင်အား တိုးချဲ့SSPP/SSA နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အစိုးရစစ်တပ်မှ ၈ ဦးကျဆုံးအစိုးရစစ်တပ် ထိုးစစ်ကြောင့် SSPP/SSA ၏ ရှေ့တန်းတပ်စခန်း ဆုတ်ခွာရငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာတူညီမျှရေး မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့
lwinhtaytunwai February 9, 2013 - 10:22 am စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကိုပြန်အသက်သွင်းချင်နေတဲလူတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ အများကြီးကျန်နေသေးတယ်။ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူတွေကို စစ်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကေ*********ကြီးတွေ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေအာဏာရဲ့ အရသာ၊ စည်းစိမ်ရပေါက်ရလမ်းတွေကို တက်မက်နေကြပြီး အမြဲတမ်းဖိနှိပ်ထားခြင်နေတာ။ ငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာ သူတို့အတွက် မလုပ်ချင်ဆုံးအရာပဲ။
Reply Okkar February 11, 2013 - 4:23 pm Losing power will mean to them losing money. Losing money will mean to them losing mistresses. Triple loss is unimaginable to the current vampires. Power, Money and Sex.
Reply Ko khine February 11, 2013 - 8:54 am ၁ ။ အဆိုးမြင် ၀ါဒီ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်သူမျာအား ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ချေမုန်းကြ ။